blockchain zvemichina sei munguva 2018? - Blockchain News
Ndira 7, 2018 arun
blockchain zvemichina sei munguva 2018?
Anenge gumi apfuura vanhu vokutanga vakawana kubuda pamusoro blockchain Michina. kubvira ipapo, vamiririri maindasitiri akasiyana vave vachiongorora kukura zvigadzirwa ichi kuwana kushandiswa nokuti muminda yavo. Uyezve, kupfuura chigaro makambani kubatanidzwa nomumwe kupinda kubatana akadai Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, uye Hyperledger Project, kuti asike itsva blockchain anotsanangura mhinduro. Tinoda kugovana pfungwa nyanzvi pamusoro pokumuka blockchain mu 2018, uye izvo makambani kuronga kushandisa zvigadzirwa zvitsva ramangwana.
Blockchain Technology Ita
Sezvo Forbes inoti blockchain achava paupamhi-siyana chokuita nenzira vashandirwi iongorore musarudzo uye muzadze mabasa. mu 2018, pachava zhinji platforms pamusoro pamusika kwakafanana dzakati, iyo inopa vanoshandisa pamwe “ngwara” Profiles pamusoro blockchain rezvebonde. Kwete chete Profiles aya ane vanoshandisa CVS, asi ruzivo nebasa dhigirii uye kubudirira, zvitupa yemakwikwi mapurogiramu zvedzidzo uye mamwe mashoko chero inokosha. kunze, masangano dzidzo uye vashandirwi vachava kuwana Profiles kusimbisa mashoko ichi, nokudaro zvichiita zvizere yakavimbika.
The zvichangobva Mushumo kubva IDC Health Insights - a kutsvakurudza uye kubvunza takasimba - anoti ari mashoma makore blockchain michina richashandiswa munzvimbo zhinji zveutano. kudzidza “Zvaifungidzirwa World of zveutano indasitiri 2018” anofungidzira kuti gore rinouya 20% mumasangano chichange vachishingaira kutanga blockchain mabasa. By 2020 blockchain richashandiswa munyaya operative utariri, uyewo kuramba Databases wevarwere. The Skycell kambani iri muenzaniso sei blockchain uye IoT kupa vakarongeka wedzerai chain neindasitiri inogadzira mishonga wakajeka, izvo zvinosanganisira kubhadhara, Billing, uye inishuwarenzi.
Panguva iyoyowo vechikamu pamusoro Blockchain Research Institute chirongwa, anosanganisira IBM, Pepsi Co., uye FedEx, kutarisira kuti blockchain rakatangwa muna kugadzira kugadzirwa Mazinga, haazovi kungova Chishandiso chikuru, asi achava embody chizvarwa wechipiri digitaalinen chimurenga, pamwe wokutanga ari nokugadzirwa Indaneti. Makambani akadai Foxconn achashandisa blockchain kuongorora kwema avo wedzerai cheni.
Blockchain Director pana LOOMIA Sauro Lederer anotenda kuti mune 2018 tichaona sei yakasimbiswa makambani, kuti kare vakakwanisa kuratidza pachavo vari mumisika siyana, achavarwisa mutyairi kuzvipatara uye zvigadzirwa inobva voruzhinji blockchain.
Chiripo makambani chaizvo Anoziva sei masangano kuti kuteerera Internet ari 90s zvaidyiwa padandemutande startups, uye havadi kuti zvakafanana blindsided pamwe pakasvika blockchain michina. Vanoziva zviri kana kutanga kuedza munhu blockchain kana nenzira imwe blockbuster.
Nemhaka blockchain, kushandiswa akangwara zvibvumirano zvichachinja zvakare. Last zhizha IT hofori IBM, American Insurance Corporation AIG, uye mari boka Standard Chartered PLC akapedza mutyairi kuidzwa blockchain anotsanangura “ngwara” dzakawanda inishuwarenzi urongwa. Kokutanga blockchain uye akangwara zvibvumirano zvaishandiswa indasitiri ino, izvo yatichawana kuva chirongwa ichi pamusoro hombe pamwero mu 2018. Oliver Bussmann ndiye chokwadi chokuti blockchain ari kuchinja kwete chete zvemari uye inishuwarenzi sectors asi ndichakubvunzaiwo tinzwe dzimwe maindasitiri. Munhau iyi, gore rinouya Makambani zhinji dzichaparara kuchinja vavo mienzaniso bhizimisi kusangana zvinodiwa misika itsva.
Munyika umo middlemen ava sharuka, Makambani achafanira kudzidza kurega kufunga mu silos uye asununguke wokuva vamwe mune zvinhu zvipenyu kana kuti yakakura platforms. kuti, mukudzosa, zvinoreva kusarudza chii marudzi dzebhizimisi mienzaniso vanoda - kana zviri papuratifomu Mitambo, chigadzirwa Mitambo, Van-mugero nzira, zvichingoenda zvakadaro.
Oliver Bussmann - purezidhendi kwete mari Crypto Valley Association uye vaimbove CIO pa UBS - akacherechedza kuti makuru nemabhangi vachava kufarira blockchain muripo nehurongwa, nokuti akaedzwa zvazvakanakira blockchain kunounza tichitarisa-zvechokwadi nguva kugadzira, dzikisa Profiles njodzi, yakaderera mari uye pachena. The muzvinabhizimisi akatiwo mu 2017, mapoka aiva neropafadzo kushanda pamwe akanga abhadhara zvikuru uye yakawanda idzva siyana mabasa. blockchain inoita, kunyanya kana blockchain pamwe IoT uye AI. Maererano Bussman, ichi kuitika acharamba ari 2018, sezvo ichangobva mashoko Forbes rinotaura uyewo. The encrypted uye decentralized hunhu blockchain inobatsira chaizvo kuti vachiongorora nokusingaperi-vachiwedzera namano musi IoT. saka, mashoko anoti kuti kadambari simba rakashandiswa migodhi BitCoins zvaigona kushandiswa kudzivirira dzimba akangwara kubva cyber-makororo kuchizvarwa itsva.
The CEO pamusoro Mwoyo wesero Vision, Saravana Pitti rinorondedzera blockchain maitiro izvo zvichabatsira kuva kusimba date kudzivirira. Achitenda kuti mune 2018, nzvimbo iyi vachaona rinonyatsooneka makomborero kubva yakawiriranwa kukura michina yakadai cryptography, encryption, uye blockchain:
Blockchain riri simba mudziyo kuti anogona kuunza shanduko yakanaka mumaindasitiri zhinji, uye isu kufanoona kuti nokufambira mberi encryption zvemichina uye cryptography, pamwe blockchain, chichava aiitwa akabudirira vakachengeteka indasitiri mu 2018. Semuyenzaniso, ari Equifax date Hack chinhu zvinodiwa zvinopfuura chete blockchain kuti zvisaitika. Nepo blockchain Michina aigona kuva chaizvo vatengi vanoti kudzora dzavo Data pachavo vaiva ne kambani, zvakaipa kuchengeteka miitiro ingadai akavasiya nyore, kana pasina blockchain. Apo blockchain kuti kuchengeteka zvinhu richafara kupinda yavo ichava coupling avo IoT. Uine-inoramba ichiwedzera kunofambidzana mano, 2018 vanoda blockchain kuti kuchengeteka mapurani kudzivirira IoT mafomu uye vanoshandisa kubva yakagozha mashoko pakakoromoka. I zvakasimba tenda kuti 2017 kwaingova turera zvinhu kupinda 2018 mhiri yose blockchain mararamiro uye chikamu.
dmitriy Zhulin, co-muvambi dzi mararamiro, anotarisira kuona blockchain kuva nevakawanda wokurera zvikuru michina iri 2018, kuchinja boka rose maindasitiri kubva mabasa zvemari uye chitoro, kune logistics uye mushonga. Panguva iyoyowo Max Kordek, co-muvambi Lisk kambani, anotenda kuti tinogona kutarisira zviitiko zvakawanda zviri blockchain Network utungamiriri mu 2018, iyo kuchasanganisira itsva nokubvumirana zvigadziriswe uye yoku- nenheyo zvisarudzo maererano samambure upgrades:
With Bitcoin kwakaita User Activated Soft Fork (UASF), kana Lisk raMwari agovera-Zvinoratidza-of-wehoko tenderano zvigadziriswe, tinogona kutarisira zvinogadzirisa yemberi kuti zvinobatsira kuita yakaoma sarudzo pamusoro purojekiti ramangwana. Nyaya scalability achava mumwe inopisa musoro kuramba kupinda 2018. Current blockchain zveupfumi vachiri lagging shure kana tichienzanisa kutengeserana aimhanya zvaipiwa chinyakare vakwikwidzi akadai Visa kana Mastercard. The Indasitiri vanofanira kuwana mhinduro itsva uye optimize remitemo kuti padanho yemakwikwi kwevari Kugamuchira zvinogona kuwanika. Ichi chimwe chikonzero Lisk ari pakutevedzera sidechains. Nechokwadi zvakanaka vakagovera zvakarukwa basa uye matauriro kubudiswa nokukurumidza pamusoro pomumbure kunokosha.
Blockchain Technology Ita 2018
Chii forogo? T ...
Mune Reddit ama musi T ...
Coincheck anotsvaka appr ...
Previous Post:Cryptocurrency musika budiriro iri 2018
Next Post:Chinonyanya kukosha zviitiko 2017 muna Crypto Community